एल क्लासिको कसको पोल्टामा बार्सा या रियल ? | सबै खेल
एल क्लासिको कसको पोल्टामा बार्सा या रियल ?
२८ पुष २०७८, बुधबार १४:३७
यो सिजनको दोस्रो एल क्लासिको अर्थात् रियल मड्रिड र बार्सिलोनाबीचको खेल आज राति हुँदैछ। स्पेनिस सुपरकपअन्तर्गतको एल क्लासिको आज राति १२ः४५ बजे किङ फाद स्टेडियम साउदी अबरमा हुनेछ।
साउदीमा रियल र बार्सिलोना भिड्दा स्वभाविक रुपमा रियलम बलियो हुनेछ । जारी सिजन दुवै क्लबले प्रदर्शनलेृ पनि त्यही भन्छ।
ला लिगामा रियल मड्रिड २१ खेलमा ४९ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ भने २० खेलमा ३२ अंकमात्र जोडेको बार्सिलोना छैठौं स्थानमा छ। रियल ला लिगमा २ खेलमा मात्र हार्दा बार्सिलोनाले ४ खेल हारेकोछ।
मेसीले क्लब छाडेसँगै बार्सिलोना खराब लयबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणबाटै बाहिरिँदै युरोपा लिग खेल्न बाध्य भएको छ।
एल क्लासिकोमै पनि पछिल्ला ५ खेल यता बार्सिलोना जित बिहीन छ । त्यसमध्ये पनि पछिल्ला चार भीडन्तमा रियल विजयी भएको छ। त्यसैले पनि बुधबार राति बार्सामाथि रियल हाबी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले क्लब छाडेपछि गोलको खडेरी खेपिरहेको रियललाई यो सिजन भिनिसियस जुनियर र करिम बेन्जिमाको फर्मले ठूलो राहत मिलेको छ। बेन्जिमाले कुल २२ गोल गर्दा भिनिसियसले १४ गोल गरेका छन्। डिफेन्डसमा इडर मिलिटाओ र डेभिड अलबाको जोडीले गज्जब खेलिरहेको छ। मिडफिल्डमा टोनी क्रुस, लुका मोड्रिच र कार्लोस कासिमिरोको लय पनि उस्तै छ।
यता, बार्सिलोना भने प्रदर्शन भने ठिकठाक मात्र छ । निरन्तर खराब प्रदर्शनपछि बार्सिलोनाले आफ्नै पूर्वखेलाडी जाभीलाई प्रशिक्षक बनायो । जाभीले नयाँ खेलाडीलाई मौका त दिइरहेको छन्, तर प्रदर्शन सन्तोषजनक मात्रै छ । उसको स्ट्राइकिङ र डिफेन्समा ठूलो समस्या छ।
भर्खरै चोट मुक्त हुँदै फर्किएका अन्सु फाटी, उसमान डेम्बेले र मेम्फिस डिपेमा कै भरमा छ बार्सिलोना । सँगै फेरान टोरेसको आगमन पनि उसका लागि सुखद् हुन सक्छ। मिडफिल्डमा फ्रांकी डि योङ, गाभी र सर्जियो बुस्केट्सको प्रदर्शन भने राम्रै छ।
टाइगर्स कप भलिबल : महिलातर्फ विभागीय टिम विजयी